Calaamadin: Bilow Ka-qaadista Raadinta Gudbinta Khariidadda Google Analytics Right Now
Dad badan ayaa ku soo gudbiya warar qarsoodi ah oo ka soo baxa warbixinnadooda Google Analytics. Ma leedahay dhibaato isku mid ah? Shaki kuma jiro, taariiqda booqashada boggagaaga waa been abuur maadaama ay dadku marnaba u dirin boggagaaga ganacsade kasta
Haddii aadan fahmin sida Google Analytics u shaqeeyo, waxaa dhici karta inaad isku buuqdo macluumaadka iyo warbixinnada aad maalin kasta hesho. Google Analytics ayaa kuu qabanqaabiya taraafikada waxayna u qaybisaa qaybo kala duwan, oo ku saleysan cinwaanada IP iyo ilaha. Shirkadaha spamming qaarkood waxay hoos u dhigaan faylasha Google Analytics iyo muujiyaan natiijooyin been abuur ah. Waxay u wadi doonaan taraafikada aan saxda ahayn ee shabakadaada iyada oo loo marayo ilo badan.
Jack Miller, Maareeyaha Guusha Guud ee Macaamiisha ee Semt , wuxuu ku macneeyaa sida looga badbaado safka gudbinta Google Analytics - book values for heavy trucks.
Ka qaadista spam u gudbinta Google Analytics
Waa xun tahay maadaama ayan marnaba u dirin goobtaada cid kale oo booqashooyinka aad hesho waa sharci darro. Si kale haddii loo dhigo, waxaan dhihi karnaa inaadan waligaa helin wax talooyin ah mana iibin kartid badeecadaada iyo adeegyadaada sababtoo ah booqashooyinka been abuurka ah. Si daacad ah u hadlaya, waxaad u baahan tahay inaad ka tirtirto spam u gudbinta xogtaada Google Analytics kahor "style =" text-decoration: none; xadka hoose-hoose: 1px adag; href = "https: // sifo..com / qa / search-engine.htm "> mashiinka raadinta mamnuucida iyo ciqaab galkaaga
Google wuxuu soo bandhigay dhowr tilmaamo, istaraatiijiyo, iyo xeelado si loo ilaaliyo bogagga internetka. Waxaad si fudud uga horjoogsan kartaa spam gudbinta iyo cinwaanada IP-da laga shakiyo oo abuuraya fiilooyin. Maadaama aadan helin booqashooyinka dhabta ah, spammers waxay u badan tahay in ay jabiyaan boggaaga iyo khatarahaaga warbixinnada Google Analytics. Marka la eego qiyaasta, in ka badan 12% websaydhiyada ayaa sanad walba la ganaaxay sababtoo ah arrintan
Abuuritaanka qaybaha Google Analytics ee xayiri kara spam gudbinta
Waxaad abuuri kartaa qaybaha koontada Google Analytics adigoo furaya qeybta Muuqaalka kaas oo ka kooban warar aad rabto inaad isticmaasho. Halkan waa inaad tagtaa Wargelinta warbixinta oo aad furto warbixinnada aad doonayso inaad wax ka beddesho ama isbeddesho. Taasi waa meesha aad ka abuuri karto qaybaha adiga oo riixaya Xulashada Segment. Waa inaadan ilaawin inaad magacawdo dhamaan qaybaha si aad uga fogaato wixii jahawareer ah mustaqbalka. Marka qaybaha si guul leh loo abuuro, tallaabada xigta waa in lagu badbaadiyo isbedelka. Waa inaadan xirin daaqadda ka hor inta aadan kaydin dhammaan isbedeladaas
Waxa suurtagal ah in aan ku raaxaysano tikidhada maalin kasta. Laakiin haddii aad shaqaaleysiisay SEO ama shirkad isbaareys ah, waxaa jira fursado ay kugu jibinayaan hal dhinac ama kan kale. Waxay ku qori karaan fiilooyinka been abuurka ah iyo qoraallada si aad ugu adeegto WordPress. Isticmaalka adeegyadooda waa mid khatar ah sababtoo ah ganacsigaaga waxaa laga yaabaa in lagu ciqaabiyo internetka.
Haddii aad rabto inaad ku guuleysatid guulaha internetka, waa inaadan walwal gelin adeegsiga adeegyadooda. Had iyo jeer xusuusnow in aysan ku siineynin booqasho dhab ah laakiin isbaaro gudbin ah. Booqashooyinka dhabta ah waxay soo iibsan doonaan qaar ka mid ah alaabtaada, iyo qoraallada ay ku gelayaan xisaabta Google Analytics oo laga yaabo in ay goobtaada ka mamnuucdo noloshooda.